खाना स्वादका लागि होइन, शरीरका लागि - ज्ञानविज्ञान
हामी किन खान्छौ ? यो प्रश्नको सटिक जवाफ खोज्ने हो भने तपाईंलाई सोधिरहनुपर्दैन कि, हामीले के खानुपर्छ ?
खानासँग हाम्रो सम्बन्ध के छ ? खाना किन खाने ? यावत् प्रश्नले हाम्रो जीवनसँग खास अर्थ राख्छ । तर, हामी बाँचुञ्जेल यस्ता प्रश्नमा घोत्लिदैनौ । किनभने खाना खानु भनेको स्वाद मेट्न मात्र होइन, पेट भर्न मात्र होइन । स्वाद मेट्ने र पेट भर्ने त अर्कै कुरा हुन् । मूलत शरीरलाई चलमान राख्न, सक्रिय राख्न, तगडा राख्न, निरोगी राख्न खाना खानुपर्छ ।
यसको अर्थ खानाको सोझो सम्बन्ध मन र जिब्रोसँग होइन, पाचन यन्त्रसँग छ । समग्र शरीरसँग छ । त्यसैले शरीरले मागेको खानुपर्छ । भइरहेको चाहि उल्टो छ । हामी मनले मागेको खान्छौ । जिब्रोले खोजेको खान्छौ ।
जबकी हामी किन खान्छौ भन्ने प्रश्नको उत्तरमा लुकेको छ हामीले के खानुपर्छ भन्ने कुरा । हामी किन खान्छौ ? स्पष्ट जवाफ हो, बाँच्नका लागि । तर, कस्तो जीवन बाँच्ने ? स्वास्थ्य, निरोगी एवं तन्दुरुस्त । त्यसो हो भने, खाना नै त्यस्तो औषधी हो जसले हामीलाई निरोगी र तन्दुरुस्त जीवन दिन्छ ।
खाना के हो ?
खाना भोजन हो, जसले पेटको भोक शान्त गर्छ । खाना पोषण हो, जसले शरीरलाई चलयामान राख्छ । खाना औषधी हो, जसले शरीरलाई निरोगी राख्छ । खाना अमृत हो, जसले जीवनको आयु लम्बाइदिन्छ ।
तर, यससँगै बुझ्नुपर्ने अर्को पाटो पनि छ ।
खाना रोग हो, जब यसको तालमेल मिलाइदैन । खाना बोझ हो, जब आवश्यक्ताभन्दा बढी खाइन्छ । खाना विष हो, जब जथाभावी खाइन्छ ।
त्यही खाना हो, जो अमृत बन्छ । विष पनि । त्यही खाना हो, जसले शरीरमा पोषण दिन्छ । रोग पनि । त्यही खाना हो, जसले आयु लम्बाउँछ । घटाउँछ पनि ।
कस्तो अवस्थामा खाना अमृत बन्छ, कस्तो अवस्थामा विष ? यसमा दोष अन्नपानीको छैन । दोष त हाम्रो पाकवन विधी र खानपान शैलीमा छ । खानालाई उचित ढंगले पकाएर, सही मात्रामा, सही तरिकाले सेवन गर्दा त्यसले शरीरलाई निरोगी बनाउँछ । तन्दुरुस्त बनाउँछ । शरीरका संभावित कतिपय रोग निर्मूल बनाउँछ ।
तर, जथाभावी र मनलाग्दो खाने गरेमा त्यो रोग बन्छ । शरीर जीर्ण बनाउँछ ।
भोजनको रासायनिक रचना
शरीरलाई शक्ति प्रदान गर्न, शरीरलाई चलायमान बनाउन, शरीरलाई निरोगी तुल्याउन हामीले बाहिरी स्रोतबाट खानापान ग्रहण गर्नुपर्छ । हामी हिँड्छौ, बस्छौ, उप|mन्छौ, खेल्छौ, काम गर्छौ । यस अवस्थामा शरीरलाई चाहिने आवश्यक उर्जा खानपानबाटै प्राप्त हुन्छ । हाम्रो शारीरिक अवयव पनि कमजोर हुन्छ, त्यसमा क्षति पुग्छ । अतः त्यसको क्षतिपूर्तिका लागि पनि भोजन आवश्यक छ । संक्षेपमा भोजनले निम्न काम गर्छ ।
भोजनबाट प्राप्त पोषक तत्वको कार्यको आधारमा तीन भागमा बाढ्न सकिन्छ ।
एक, शारीरिक विकास, बृद्धि एवं जैविक कार्यका लागि उर्जा प्रदान गर्ने पदार्थ
दुई, शरीर निर्माण गर्ने पोषक तत्व
तीन, स्वास्थ्य रक्षा गर्ने पदार्थ
सन्तुलित आहारको विभिन्नता
विभिन्न व्यक्तिको अनेक कार्य अनुसार भोजनमा विभिन्न पौष्टिक तत्व भिन्न भिन्न मात्रामा आवश्यक हुन्छ ।
उमेर- बाल्यवस्थामा जब शरीर विकसिकत हुन्छ तब बालकलाई वोसो र प्रोटिन अधिक मात्रामा चाहिन्छ । वृद्धावस्थामा पाचनशक्ति दुर्बल हुन्छ, तब यी तत्वको आवश्यक्ता कम हुँदै जान्छ ।
जलवायु- शीतप्रधान देशमा ग्रीष्मा प्रधान देशको अपेक्षा तापको अधिक उपयोग हुन्छ । अतः शीत प्रदान देशमा अपे्क्षाकृति अधिक भोजनको आवश्यक्ता हुन्छ ।
लिंग- पुरुषको अपेक्षा महिलाको लागि भोजनको मात्रा अलि कम आवश्यक हुन्छ ।
परिश्रम- शारीरिक परिश्रम गर्ने व्यक्तिको शरीरमा अधिक उर्जा वा उष्णता ह्रास हुन्छ । त्यसको पूर्तिका लागि अधिक भोजन चाहिन्छ ।
यी भए खानपानबारे आधारभूत कुरा । खाना किन खाने, कति खाने, कसरी खाने भन्ने कुरा हाम्रो शारीरिक अवस्थाले पनि निर्धारण गर्छ । यद्यपी हामीले त्यती नै खाना खानुपर्छ, जति शरीरलाई आवश्यक छ । हामीले त्यसरी नै खाना खानुपर्छ, जसलाई सहज रुपमा पचाउन सकिन्छ ।
१. ताजा, पोषिलो, सन्तुलित र सुपाच्य खानेकुरा सेवन गरौ ।
२. संभव भएसम्म आफैले पकाएको खानेकुरा सेवन गरौं । कम्तीमा आफ्नै घरमा पकाएको सेवन गरौ ।
३. दिनभरमा कम्तीमा चार/पाँच पटक खानेकुरा सेवन गरौं । धेरै पटक तर थोरै थोरै मात्रामा खानेकुरा सेवन गर्दा पाचन यन्त्रलाई सहज हुन्छ ।
४. दिनभरको खानामा विविधता पस्कने प्रयास गरौ । सन्तुलित भोजना ग्रहण गरौ ।
५. विहान नास्ता अनिवार्य गरौं । साँझ सूर्योअस्तपछि
निबुवाको रस पारम्परिक रुपमा पाचनका लागि प्रयोग गरिदै आएको छ । निबुवाको गन्ध र स्वाद दुवैले अत्यधिक उत्पादन गर्न मद्दत गर्नेछ । निबुवाजस्तै सुन्तला पनि पाचन प्रणालीमा सहयोगी हुन सक्छ ।
जडिबुटी र मसलाले भोजनमा स्वाद मात्रै बढाउँदैन, बल्कि यसले तपाईंको पाचनमा पनि सहयोग पुर्‍याउँछ । यसको स्वाद र गन्ध दुवै ग्यास्ट्रिक र र्‍याल पैदा गर्न सहायक हुन्छ ।
उदाहरणका लागि धनिया, अदुवा, जिरा, मरिच, खुर्सानी र बेसारले तपाईंको पित्त अम्ललाई बढाएर कार्बोहाइड्रट र बोसोलाई पचाउन मद्दत पुर्‍याउन सक्छ ।
धुम्रपान गर्दा यसले तपाईंको खाद्यनलीभन्दा मुनि माँसपेशीहरुलाई कमजोर बनाउँछ । जसबाट पेटमा एसिड बन्ने प्रक्रियालाई रोक्न थुप्रै समस्या उत्पन्न हुन्छ ।
यसैगरी थोरै रक्सी पिउनु वा सिमामा बसेर पिउनुले तपाईंको शरीरलाई कुनै हानी गर्दैन । तर, बढि रक्सी पिउँदा यसले पेटमा एसिडको उत्पादन बढाउन सक्छ । र, अन्य पाचनसम्वन्धि समस्याहरुलाई पनि निम्तो दिन सक्छ ।
फाइबर भएको खानेकुरा खानुहोस् । त्यो भनेको तपाइको खानेकुरा धेरै ल्यासल्यास परेको हुनु हुँदैन । घुलनशील फाइबरले पानीलाई अवशोषित गर्छ र तपाईंको निस्काशन सही हुन्छ, जो आफ्नो आन्द्रामार्फत सजिलै बाहिर निस्किन्छ ।
त्यसैले मैदाबाट बनेका खानेकुरा भन्दा गहुँको पिठो वा चामलको पिठोबाट बनेका खानेकुराले राम्रो गर्छ । चना, स्याउ जस्ता खानेकुरा फाइबरयुक्त हुन् । सागपात पनि फाइबरयुक्त हुन्छन् ।
हामीले कुन समयमा कति खाना खाने ?
Don't Miss it सम्बन्धमा आत्मीयता कसरी ल्याउने ? अब यसरी सम्बन्धलाइ सुमधुर बनाउनुहोस्
Up Next गर्मी मौसममा कस्तो खानेकुरा खाँदा फाईदा हुन्छ ? जान्नुहोस्
के तपाइलाइ टाउको दुख्ने समस्या छ ? सधैँ यस्ता कुराहरूबाट टाढा रहनुहाेस्
टाउको दुख्दा सधैँ पेन किलर खाँदा तपाईको दुखाई एकपटक मात्रै निको हुन्छ । केही दिन, महिना पछि तपाईको टाउको फेरि…
फ्रिजको पानी पिउँनु हानिकारक
गर्मी मौसम सुरु भैइसकेको छ । गर्मी हुँदा अधिकांश व्यक्ति फ्रिजको चिसो पानी पिएर तत्काल आनन्द लिन चाहन्छन् । तर,…
गोरो हुन मन छ ? यस्ता छन् गोरो हुने घरेलु उपाय
कागतीको रस, दही र गोलभेँडा : कागतीको रस, दही र गोलभेँडामा रंग बदल्ने गुण हुन्छ । कागतीले अनुहारको दाग हटाउन…